Go'aan kasoo baxay kulan fogaan-arag ah oo ay yeesheen RW Rooble iyo Madaxda maamul Goboleedyada - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Go'aan kasoo baxay kulan fogaan-arag ah oo ay yeesheen RW Rooble iyo Madaxda maamul Goboleedyada - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Go’aan kasoo baxay kulan fogaan-arag ah oo ay yeesheen RW Rooble iyo Madaxda maamul Goboleedyada
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiint Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul Goboleedyada ayaa caawa shir ku yeeshay Khadka Internet-ka, iyadoo shirka laga soo saaray go’aan ku saabsan Doorashada.
Kulanka oo ka dhacay aaladda fogaan ayey Golaha Wadatashiga Qaranka uga hadleen xaaladda Doorashada oo laga deyriyey dib u dhaca hareeyay iyo sidii loodardar gelin lahaa.
Gunaanadkii shirka ayaa la sheegay in la isku afgartay in si deg deg ah dhammaan Dowlad Goboleedyada looga bilaabo doorashooyinka Golaha Shacabka, laguna soo gabagabeeyo si looga fogaado dib u dhac ku yimaada doorashooyinka.
Previous articleGuddiga Doorashooyinka Federaalka oo War cusub kasoo saaray Doorashada Golaha Shacabka
Next articleHaweeney lagu dilay Degmada Hodon ee Magaalada Muqdisho iyo faahfaahin laga helay